Dayuuradii siday Sala oo ugu dambeyn la helay!!!! – Gool FM
Dayuuradii siday Sala oo ugu dambeyn la helay!!!!
(Europe) 04 Feb 2019. Kaddib baaritaano gaar ah, waxaa ugu dambeyn la helay Diyaaradii siday Saxiixa Cusub ee Cardiff City Emiliano Sala iyo Duuliye David Ibbotson.
Laacibka reer Argentina ayaa la waayay 21-ka bishii Janaayo mar uu ka soo safrayay magaalada Nantes ee Faransiiska kuna soo jeeday Cardiff.
Qoyska Sala, Sky News iyo Saxafiga Christian Martin ee ka howl gala Fox Sports ayaa xaqiijiyay in la helay bur-burka diyaaradii siday laaacibka taa oo laga helay halka hoose ee Biyaha English Channel.
Agaasimaha guddiga ku howlanaa baaritaanada ee soo helay bur-burka diyaaradii siday Sala iyo Duuliyaha ayaa tacsi u diray reeraha labada ruux ee nolol iyo geeri lagu waayay.
Cardiff ayaa dooratay inay lacagihii ugu badnaa ebid taariikhda kooxda ku soo iibsato Sala kaddib markii uu 12-gool u dhaliyay Nantes 19-kulan uu u ciyaaray horyaalka Faransiiska, Taageerayaasha Cardiff nasiib uma yeelan inay daawadaan dhaliyahooda Cusub balse markasta waa la xusuusnaan doonaa.
muuqaalka diyaaraddii la helay oo biyaha hoostooda taalla
Jamahiirta Real Madrid oo u codeeyay saddexda weerar ay doonayaan inuu isticmaalo tababare Solari kulanka El Clásico
Philippe Coutinho oo fariin dheer ka helay Halyeeyga kooxda Barcelona ee Hristo Stoichkov
Cabdiqadir guudow says:
Asc gool fm,
Aad ayaan uguxumaha ciyaar yahanka aan nasiibka uyeelanin inuu xirfadiisa sii wato ee SALA.geeraiisuna waa mid saameen kuyeelatay dhamaan bahda sportika .SORRY SALA,SORRY CARDDIF.
MAHADSANIDIIN GOOL FM